को हुन् ? 'बादललाई हराउने देवकोटा ' - ढोरपाटन पोष्ट
को हुन् ? ‘बादललाई हराउने देवकोटा ‘
२०७८ जेष्ठ ७, शुक्रबार ०६:०३
नेपालको राजनैतिक परिदृश्यमा यतिवेला माओवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री पदसहित एमालेका छिरेका रामबहादुर थापा र एमालेकै माधव नेपाल समुहबाट उपनिर्वाचनमा भाग लिएर तिनै बादललाई हराउने खिमलाल देवकोटाको चर्चा छ ।
यो चर्चामा एमाले ओली पक्षले इमान्दार राजनैतिक नेता मानेको रामबहादुर थापा भन्दा कनिष्ट भनिएका खिमलाल देवकोटाबीच राजनैतिक हैसियतको तिखो, रुखो र खरो अन्तरराजनैतिक टिकाटिप्पणी भए । आखिर दुवैजना एमाले पाटिैका तर्फबाट भिन्नाभिन्नै तरिकाले उमेद्वार थिए ।
‘थालको झरे भुईमा हुनुपर्दथ्यो तर यहाँ विटको झरे थालमा’ भएको छ । तर राजनीतिमा भुईको उक्लेर थालमा चढेपनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरुलाई त्यही पद, ‘भ्यागुताको धार्नी’ हुनेवापनि छ ।
एमालेभित्रको शक्ति संघर्षको समय चलेको बेला राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेकै खिमलाल देवकोटालाई अरु राजनैतिक शत्तिले समेत मतदान गरेर निर्वाचित गराएपछि, ओली पक्षले नैतिकताको हार मानेको छ ।
विहिबार सम्पन्न भएको निर्वाचन र त्यो रेशमा रहेको दुईजना (माओवादीबाट आगन्तुक एमाले, र रैया एमाले) प्रतिनिधिबीच भएको चुनावी प्रतिस्पर्धामा एमालेको आधिकारीक चुनाव चिन्ह सुर्यको हार भएको र स्वतन्त्र उमेदवारको कलम विजयी भएको हो ।
मान्छे एमालेका तर स्वतन्त्र उमेदवार भनिएका डा. देवकोटाले ५ हजार ८८ मतभार प्राप्त गर्दा, एमालेका जोहोदा उमेदवार बादलले ४ हजार १४ मत प्राप्त गरे ।
बागमती प्रदेश सभाका १ सय ५ जना सदस्यले मतदान गर्दा डा देवकोटाले विजयी हासिल गरे । जहाँ देवकोटालाई ५८, बादललाई ४५ र नेपाल मजदूर किसान पार्टिका कृष्णबहादुर तामाङ २ मत झर्यो ।
मत परिणम अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले समेत डा. देवकोटालाई बढी रुचाएको देखियो । बागमती प्रदेशमा २ सय ३३ जनाले मतदान गर्दा देवकोटाले १ सय २८ पाए भने बादलले १ सय ३ मत पाए । मजदूर किसान पार्टीका तामाङले २ मत पाएका थिए ।
को हुन देवकोटा :
कलम चिन्हवाला, जो स्वतन्त्र उमेद्वार रहे । बादललाई पछि हुत्याउँदै, विजय हासिल गरेका डा. देवकोटा विक्रमसम्वत २०३० सालमा कास्कीको साविक चापाकोट गाविस वडा नं. ४ र हाल पोखरा वडा नं. २३ मा जन्मिएका थिए । देवकोटाले चापाकोटमै प्राथमिक शिक्षा हासिल गरका थिए ।
विक्रमसम्वत २०३७ सालमा परिवारसहित बाराको साविक सपही गाविस बसाइँ सरे । माध्यमिक तहसम्मको अध्ययनले बारामै सकियो । देवकोटा उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको बुझिएको छ । त्रिविबाट विकास अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी (पिएचडी) सकेका डा. देवकोटाले युनिभर्सिटी अफ साइप्रसबाट इकोनोमिक एनाइलाइसिसमा एमएसी गरेका छन् ।।
हाललाई बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेतमा पनि डा. देवकोटाले एक वर्ष सेवा गरिसकेका छन । खासगरी संघीयता कार्यान्वयनमा खरो बहसमा उत्रिने उनले २०७६ असार ३१ मा प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको ४५ दिनमै प्रदेशको प्रोफाइल तयार गरेका थिए ।
सातै प्रदेशमध्ये बागमतिको योजना आयोगले मात्रै आधारपत्र तयार साथै लगानी सम्मेलन समेत सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने नेतृत्वकर्ताका रुपमा देवकोटालाई मानिन्छ । त्यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयको वित्त आयोगमा रहेर पनि नेतृत्वमूलक जिम्मेवारी सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
सार्वजनिक वित्त, स्थानीय राज्यसत्ता तथा योजना निर्माणमा लामो अनुभव संगालेका डा. देवकोटाले सरकारी निकायलाई परामर्श दिने काममा सहयोग गर्दै आइरहेको बुझिन्छ । संघीयताको अभ्यासमा बामे सर्दै गरेको मुलुकलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट आफ्ना वस्तुतः विचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छन ।
भर्खर मात्र निर्वाति भएका डा. देवकोटाले राष्ट्रिय सभा विज्ञहरुको थलो हुनुपर्ने बताउँछन् । संकटमा फसेको संघीयता, यसले परिणाम दिन नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाबाट जिम्मेवारी पाएमा उनले आफ्नो अनुभवको योगदान दिन सक्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको महत्व, औचित्य र आवश्यकताका हिसावले डा. देवकोटा जस्ता विज्ञहरुलाई लैजानुपर्ने हो । तर ठेगान नपाएको राजनीति, अध्ययन नभएका नेतालाई पदपागरि र राजनैतिक बैईमानहरुको दादागिरीले देश भड्खालोमा जाकिएको सचेत नागरिकलाई परैबाट थाहा छ । अहिलेको राजनीति र त्यो थलो भनेको पाखण्डीहरुको रजाई गर्ने दाँई हो । जहाँ नैतिकता, क्षमता, निष्ठा भन्ने विक्दैन र टिक्दैन ।
सल्यानमा थप ३ जना काेराेना संक्रमितकाे मृ’त्यु भएको छ
बादलको हारपछि अत्तालिएका ओली